के तपाई मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब खानुस लसुन - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»के तपाई मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब खानुस लसुन
के तपाई मोटाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब खानुस लसुन
By मनिषा थापा on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०५:५४ स्वास्थ्य/जीवनशैली
लसुन संसार भरीनै लोकप्रिय छ, लसुन बिनाको भान्साको कल्पनानै गर्न सकिन्न । त्यसै पनि बुढा पाकाहरु लसुनलाई एकदम उत्तम घरेलु औषधी मान्ने गर्दछन् ।
लसुनमा यस्तो तत्व पाईन्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्वस्थमा निकै फाईदा गर्दछ । लसुनले हाम्रो शरिरमा कोल स्टोरको मात्रा कम गर्नु को साथै क्यान्सरसंग पनि लड्ने क्षमता दिन्छ । यसको दैनिक प्रयोगले हाईपरटेन्सन,डाईबेटिज र रुघा खोकी पनि कम गर्दछ ।
स्वास्थ्य बिज्ञहरुका अनुसार लसुनले मोटोपना घटाउन पनि मद्दत गर्दछ ।यसले हाम्रो शरिरको मेटाबोलिजम बढाउछ जसले शरिरको क्यालोरी घटाउन मद्दत गर्दछ । लसुनले हाम्रो शरिरमा भा’को खराब कोलिस्टोर घटाउँछ,जसले गर्दा हृदयघात हुनबाट जोगाउँछ ।
लसुनको सेवनले रगत सफा हुने बिज्ञहरुको भनाई छ । जस्ले गर्दा रगत जम्मे सम्भावना निकै नै कम हुन्छ,र यसले एन्टी क्यान्सर ,एन्टी ईम्फ्लामेट्री र शरिरमा कोलस्टोर घटाउने काम गर्दछ ।